Tag: Quickbook | Martech Zone
Maka: Anokurumidza mabhuku
Databox: Teedzera Performance uye Tsvaga Maonero muReal-Nguva
NeChishanu, Nyamavhuvhu 10, 2018 Chishanu, May 21, 2021 Douglas Karr
Databox mhinduro yedashboard iyo kwaunogona kusarudza kubva kune dzakawanda zvekubatanidzwa kwakavakwa-kare kana kushandisa maAPI nema SDKs kuunganidza nyore nyore data kubva kune ako ese masosi enhoroondo. Databox Designer yavo haidi chero kukodha, nekudhonza uye kudonhedza, kugadzirisa, uye yakapusa dhata sosi yekubatanidza. Databox Zvimiro Zvinosanganisira: Nyevero - Gadza zviyeuchidzo zvekufambira mberi pane yakakosha metric kuburikidza Push, email, kana Slack. Matemplate - Databox yatove nemazana ematemplate akagadzirira
Wrike: Wedzera Kugadzira, Kubatana, uye Batanidza Yako Yemukati Kugadzira
NeChishanu, Gumiguru 23, 2015 Muvhuro, Zvita 7, 2020 Douglas Karr
Ini handina chokwadi chekuti isu taizokwanisa kuitei pasina kubatirana chikuva chedu zvemukati zvigadzirwa. Sezvo isu tichishanda pane infographics, chena mapepa, uye kunyangwe blog zvinyorwa, maitiro edu anotama kubva kune vaongorori, kune vanyori, kune vagadziri, kune vapepeti uye vatengi vedu Ivo vangori vanhu vakawandisa vanobatanidzwa kupfuudza mafaera nekudzoka pakati peGoogle Docs, DropBox kana email. Isu tinoda maitiro uye vhezheni kuitira kusundira kufambira mberi kumberi pane dzakawanda zve
Stitch Labs inopa yakabatana odha uye yekuverenga manejimendi kune e-commerce chiteshi. Dzivisa manyore kupinda muhuwandu hwehuwandu mune maspredishiti, kutsvaga mavovoice, kana kutarisa kumusoro kwekubata info. Stitch inokutendera kuti utengese mune dzakawanda nzira dzekutengesa uye yekudzivirira hesera kubva kune imwe nzvimbo Stitch Maitiro Akawanda Ekutengesa Magero - Chengetedza zvese kubva kuodha kusvika kubhadhara kusvika pakutakura mune imwe chete sisitimu. Inventory Management - chengetedza manhamba akajeka uye kuve nechokwadi kuti maodha ari kugadziriswa nenzira kwayo. Raira Kutevera - shandura